Homeभगवानको पूजाका लागि विहान सबै भन्दा उत्तम समय किन ?
November 8, 2018 Spnews Comments Off on भगवानको पूजाका लागि विहान सबै भन्दा उत्तम समय किन ?
भगवानको पूजा गर्नका लागि विहानको समय सबै भन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ। हुनत दिनभर जुन कुनै समयमा पनि सच्चा मनले भगवानको आराधना गर्न किन्छ। तर मुहुर्तमा पूजा गर्नुको विशेष महत्व हुन्छ। विहान विहान पूजा गर्दा हाम्रो मन […]
August 17, 2018 Spnews Comments Off on भगवानको पूजाका लागि विहान सबै भन्दा उत्तम समय किन ?
एजेन्सी । भगवानको पूजा गर्नका लागि विहानको समय सबै भन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ। हुनत दिनभर जुन कुनै समयमा पनि सच्चा मनले भगवानको आराधना गर्न किन्छ। तर मुहुर्तमा पूजा गर्नुको विशेष महत्व हुन्छ। विहान विहान पूजा गर्दा […]